Ereteriya waa Dalka kaliya ee Afrikaanka ah ee aan laheyn kiis COVID-19 – Beegsonews-Wararka maanta
Home Caafimaadka Ereteriya waa Dalka kaliya ee Afrikaanka ah ee aan laheyn kiis COVID-19
Ereteriya waa Dalka kaliya ee Afrikaanka ah ee aan laheyn kiis COVID-19
16ka Meey 2020 – Eritrea waa dalka kaliya ee Afrikaanka ah ee aan lahayn xannuun COVID-19 oo ka jira isla markaana diwaangashan geerida, sida lagu sheegay macluumaadka laga helay Worldometer.
Shalay, Eritrea waxay soo sheegtey in dhammaan bukaannada COVID-19 ay si buuxda uga soo kabsadeen oo laga sii daayay isbitaallada.
Toddobaadkii la soo dhaafay, warbaahinta Faransiiska ayaa soo jeedisay in dadka Afrikaanka ahi ay ku daydaan qaabkii Ereteriya ee lagula dagaallami lahaa COVID-19.
“Ereteriya waxay gaadhay natiijooyin aad u wanaagsan ka hortagga iyo maaraynta cudurka faafa ee Covid-19 iyada oo aan wax faragelin iyo caawimaad shisheeye ah lagu samayn,” ayay qortay France24heures.
Waxa xusid mudan, Ereteriya waa dalka kaliya ee Afrikaanka ah ee diida xirmooyinka tijaabada Coronavirus ee Shiinaha iyo Qalabka Ilaalinta Shaqsiyadeed (PPE).
Ku-deeqida PPE ee Shiinaha ay siisay mid kasta oo ka mid ah 53-ka dal ee Afrikaanka ah, marka laga reebo Ereteriya, ayaa waxaa qaybiyay xunuunka duulimaadyada ugu weyn qaaradda ee qaaradda ee Ethiopian Airlines.
Si kastaba ha noqotee, Ereteriya kaliya maahan wadamada adduunka ee diida Shiinaha ‘PPE’. Wadamo dhowr ah oo ka tirsan Midowga Yurub ayaa diiday xirmooyinka baarista coronavirus ee Shiinaha laga sameeyay iyo qalab ilaalin ah iyada oo la adeegsanayo, iyagoo sare u qaaday welwelka ku saabsan tayada sahayda.
Wadamada horumaray sida Boqortooyada Ingiriiska ayaa diidey xirmooyinka tijaabada Shiinaha ee loogu talagalay coronavirus maxaa yeelay waxaa lagu ogaaday inay tahay mid aan lagu kalsoonaan karin oo khatar ah.
Dhanka kale, dowladda Ereteriya ayaa sheegtay maanta, laga bilaabo Axadda, 17ka Maajo, in waddanku uu bilaabi doono in uu sameeyo baaris ballaaran oo COVID-19 ah oo laga qaadayo dadka deggan magaalada Asmara iyada oo loo marayo tijaabinta aasaaska ah iyo dhammaan magaalooyinka iyo tuulooyinka u dhow soohdinta.
Asmara waxay buuufisey wadooyinka waaweyn, meelaha dadweynaha iyo aagagga dadku ku badan yahay si looga ilaaliyo coronavirus-ka cusub.
yadoo ay sheegtey Eritrea in dhamaan dadkii xanuunku soo ritey ay ka bogsadeen iyadoo aaney jirin wax dhimasho ah.
Previous articleXaaladaha ugu danbeysay COVID-19 Somaliland .
Next articleWarbixintii ugu danbeysa COVID19 Itoobiya, 11 qof oo ka yimid jigjiga oo laga helay Xanuunka
Daraasad: Cunista Basbaaska Waxaa Laga Helaa Cimri Dherer